Anụ anụ anụ CrockPot - Ezi Ntụziaka
taco itinye na ala beef ude cheese na utoojoo ude
ahụekere bọta butter osikapa krispy emeso na chocolate
-esi mee ka ihe itapia antipasto
Anụ anụ anụ CrockPot
Anụ anụ anụ CrockPot bụ otu n'ime ọkacha mmasị m ngwa ngwa cooker nri. Ọ na-ejuputa ma na-atọ ụtọ na obere anụ anụ ehi, karọt, poteto na peas (ma ọ bụ agwa ndụ ndụ). A bịa n’iri nri na-enye afọ ojuju, Beef Stew bụ nwayọ!
Iji mezue nri ahụ, naanị ihe ị ga-eme bụ ịgbakwunye n'akụkụ mfe buttermilk biscuits ma ọ bụ achịcha ọka muffins na-etinye butter. Ma ọ bụ, jiri achịcha a na-arụrụ n'ụlọ jiri ya tinye nri. Onye ọ bụla ga-anọ n’eluigwe!
isi nri ibe anụ kabobs na oven
Akụrụngwa maka Nri Ngwa Ngwa
Efrata maka anụ a na-esi ehi ehi CrockPot bụ anụ bekee ma ọ bụ anụ ehi, akwụkwọ nri mgbọrọgwụ dịka poteto, carrots na ọhụrụ na peas ma ọ bụ agwa.
ọkụkọ salad uzommeputa na ebe ana-azu umuanu
Anụ kacha mma iji mee anụ ehi bụ chuck ibe anụ! ’Ll ga-egbutu ya n'ime cubes n'onwe gị. Chuck bụ anụ siri ike, mana anụ zuru oke nke na-esite n'ubu na njedebe ihu anụmanụ ahụ. O zuru oke maka ite anụ ọka Crock ma ọ bụ anụ anụ (ihe yiri ya na ubu anụ ezi nke ejiri mee Ikuku ite a kpochapuru ). Ọ na-ejigide ọgaranya ya, ụtọ beefy wee bụrụ onye na-enye obi ụtọ ma na-adị nro n'okpuru obere na nwayọ nwayọ nke ite ite.
Osi nri Nri Anụ Na-atọ tọ: Ihe na-eme stew bụ ofe bụ ahịhịa na-atọ ụtọ, nke na-atọ ụtọ na anụ efere. Iji nyekwuo nri karịa mgbagwoju anya, tụlee ime achịcha bekee CrockPot na mmanya uhie. Dochie otu iko mmanya dị ụtọ, dị ka Cabernet Sauvignon ma ọ bụ Merlot maka otu iko nke beef broth ma jiri ya deglaze pan ị na-eji agba aja anụ. Nwekwara ike tinye na ụfọdụ bọtịnụ mushrooms kwa.
Otu esi eme anu anumanu n’ime ite ite
Mgbe anyị hụrụ n'anya ime ka a kpochapụwo osi ite n’elu anụ ehi , Ntụziaka dị mfe nwayọ nwayọ nwere ike ịhapụ isi nri ka ị na-aga ụbọchị gị! Ite anụ esi esi ofe anụ na-abịakọta ọnụ na ole na ole dị mfe ma anụ ehi dị nro.
Kpoo ehi ahụ na ntụ ọka-galik na ntụ ọka iji ghee, na agba aja aja na mmanụ oliv na ogbe. Esochila pan. (Can nwere ike ịhapụ usoro a mana browning na-agbakwunye nnukwu ekpomeekpo na stew).
Ghaa yabasị na otu pan ahụ (jiri broth ma ọ bụ mmanya na-acha ọbara ọbara nyere aka deglaze ma gbakwunye obere agba aja na ite gị).
Tinye ihe niile na ngwa ngwa nwayọ (ana m eji a 6qt ite ite ) Ma sie nri ruo mgbe anụ ehi ahụ dị nro. Mee ka peas tupu ị na-eje ozi.
Ogologo oge ka esi esi esi nri anụ ehi na ite ite: Efere anụ esi esi nri bụ ụdị setịpụrụ-echezọ-echezọ. Kwadebe ya n'elu maka awa 4-5, ma ọ bụ dị ala maka 8-9 ruo mgbe anụ dị nro. Can nwere ike ịhapụ ya na ọkụ maka awa ọzọ ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
To Thicken Beef Stew in the Crock ite: Ana m eji slurry cornstarch (akụkụ ndị yiri ya na mmiri) ma tinye ya na njedebe. Kwe ka ọ sie ihe dị ka nkeji 10 mgbe ị gbakwunye slurry iji kpochapụ ụtọ starchy ọ bụla.
Ezi ntụziaka maka goulash na ngwa ngwa osi nri
Anyị na-enye achịcha beef na ụfọdụ achịcha ekoro ma ọ bụ achịcha nri abalị maka nri zuru oke!
Mpempe Mpempe anụ ehi
Ihe fọdụrụnụ ga-edebe ihe dị ka ụbọchị 3-4 na ngwa nju oyi.
1 iko osikapa na-emeghị ka ọ hà otu esi esi nri
Nwere ike ifriizi Anụ ehi: Ga-enwekwa obi ụtọ ịmara CrockPot Beef Stew freezes n'ezie nke ọma, yabụ mee ọtụtụ maka nri abalị nri ndị ahụ ngwa ngwa. Hapụ ihe dị ka sentimita asatọ nke oghere isi maka ịgbasa na ngwa plastik, nri gị ga-anọkwa ọnwa anọ na friza.
Ọkụkọ ọkụkọ - nwa m nwanyị ọkacha mmasị
Ọsọ ite ite anụ - mfe
Nri anụ ehi - kpochapụwo
Nwa Atụrụ atụrụ (Irish Stew) - Obi!
Nri ọka bali - ahụike na-atọ ụtọ
4.91site na209votu NyochaNtụziaka
Efere Azụ anụ Crock
Oge Nkwadebeiri abụọ Nkeji Oge nri4 awa Oge zuru ezu4 awa iri abụọ Nkeji Ọrụ6 servings Onye edemedeHolly Nilsson Anụ anụ ahịhịa CrockPot bụ otu n’ime nri kacha amasị m oge niile. Ọ na-ejuputa, na-atọ ụtọ, ezinụlọ na-ahụkarị ya n'anya, ọ dịkwa mfe ịkwadebe tupu oge eruo. Bipute Ntụtụ
▢abụọ paụnd anu bekee ma obu ihi anu ehi
▢3 tablespoons ntụ ọka
▢½ ngaji ntụ ntụ
▢3 tablespoons mmanụ oliv
▢1 yabasị gbanwere
▢1 iko ihe ọ juiceụ juiceụ ihe oriri dị ka V8
▢4 iko beef efere
▢1 ngaji Worcestershire ihendori
▢½ ngaji thyme ma ọ bụ 2 sprigs ọhụrụ
▢1 ngaji Rosemary kpọrọ nkụ ma ọ bụ 1 sprig ọhụrụ
▢3 iko nduku pee akwa na cubed
▢abụọ iko karọt gbutuo n’ime 1 inch
▢1 iko celery stalks gbutuo n’ime 1 inch
▢¾ iko peas
▢abụọ tablespoons ọka
▢abụọ tablespoons mmiri
Ikpokọta ntụ ọka, galik ntụ ntụ na nnu & ose nụrụ ụtọ. Toss amịrị na ntụ ọka.
Agba aja ehi na eyịm ke olive mmanụ obere ogbe. Tinye ụfọdụ ofe na pan wee hichaa agba aja aja ọ bụla.
Tinye ihe niile ma e wezụga peas na ọka ọka na 6QT ngwa ngwa.
Esi nri na elu 4-5 awa ma ọ bụ na obere 8-9 awa ma ọ bụ ruo mgbe amịrị dị nro.
Gwakọta ntụ ọka na mmiri tablespoons abụọ. Bido n'ime stew ntakịrị oge iji sie ike (ị nwere ike ọ gaghị achọ ngwakọta niile). Tinye peas.
Kpuchie ma sie 10 nkeji. Oge na nnu & ose.
Calorisị:480,Carbohydrates:29g,Protein:36g,Abụba:24g,Abụba Ajuju:8g,Cholesterol:104mg,Sodium:Ogbe 503mg,Potassium:1622mg,Eriri:5g,Sugar:5g,Vitamin A:7545IU,Vitamin C:31.4mg,Calcium:94mg,Iron:7.6mg
IsiokwuNri anụ ehi crockpot N'ezieAnụ ehi, Isi Agụmakwụkwọ, Ngwa ngwa ngwa Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .